Tanneri Voice – Page2– Tanneri Chaso
Vote for Right Candidate (Drama)
Tanneri Chaso	May 5, 2017
तानसेनका मतदाता कस्ता उम्मेदवार चाहन्छन्?
Tanneri Chaso	April 29, 2017
-प्रदिप घिमिरे, तानसेन-पाल्पा |
निर्वाचन भनेको जनताले प्रत्यक्ष रुपमा मतदान गरी आफूले चाहेका उम्मेदवारहरु चुन्ने प्रकृया हो । लोकतन्त्रमा निर्वाचन अपरिहार्य छ । निर्वाचन विना लोकतन्त्रको वैद्यताको कल्पना पनि गर्न सकिंदैन । नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा वि.सं.२००७ साल फागुन ७ गते प्रजातन्त्र प्राप्ती भएपछि निर्वाचनको चर्चा सुरु हुन चालेको हो । प्रजातन्त्र प्राप्ती भएपछि पनि जनताले मतदान गरेर आफ्नो प्रतिनिधी चुन्न धेरै समय पर्खनुप¥यो । प्रजातन्त्र आएको ८ वर्षपछि वि.सं.२०१५ फागुन ७ देखी २०१६ वैशाख सम्म नेपालमा पहिलोपटक आम निर्वाचन भएको थियो । उक्त निर्वाचन मार्फत पहिलोपटक जनताले आफ्नो प्रतिनिधी चुन्ने मौका पाए । त्यसछि विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमले लामो समयसम्म देशमा निर्वाचन हुन पाएन । वि.सं. २०४६ सालमा जनआन्दोलन सफल भएपश्चात वि.सं. २०४८ वैशाख २९ गते आम निर्वाचन सम्पन्न भयो । तत्पश्चात वि.सं.२०५१ कार्तिक २९ गते देशमा मध्यावधी आम निर्वाचन भयो । वि.सं.२०५४ सालमा स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । त्यसबेला ३,९१२ गा.वि.स. र ५८ वटा नगरपालिका को कुल १,८८,०१० पदको लागि निर्वाचन भएको थियो । जनताले पहिलोपटक स्थानीय जनप्रतिनिधी चुनेका थिए ।
तर बिडम्बना, ५–५ वर्षमा हुनुपर्ने स्थानीय निकायको निर्वाचन २० वर्षपछि बल्ल हुन लागेको छ । अथवा वि.सं. २०५४ सालमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधीहरुको पदावधी सकिएको १५ वर्षपछि स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन लागेको छ । तत्कालीन ने.क.पा.माओवादी ले सुरु गरेको जनयुद्ध र अन्य राजनीतिक घटनाक्रमहरु ले गर्दा देशमा स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन सकेन । संविधानसभाको निर्वाचन २ पटक हुँदा समेत स्थानीय निकायको निर्वाचन नहुनु मा नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरु नै मुख्य दोषी रहेका छन् ।
नयाँ नेपालको नयाँ संविधान वि.सं.२०७२ असोज ३ गते जारी भएपछि भने दलहरु स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न लागि परेका छन् । जसको फलस्वरुप आगामी वैशाख ३१ गते र जेठ ३१ गते दुई चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुन लागेको छ । संविधानले व्यवस्था गरेअनुरुप नेपालमा कुल ७४४ स्थानीय तह कायम गरिएको छ । जसमा ४८१ गाउँपालीका, २४६ नगरपालीका, १३ उप–महानगरपालीका र ४ वटा महानगरपालीका रहेका छन् । अब हुने निर्वाचन मार्फत जनताले कुल ३४,८८८ स्थानीय जनप्रतिनिधी चुन्नेछन् । जसमा गाउँपालीका अध्यक्ष ४८१, गाउँपालीका उपाध्यक्ष ४८१, नगरपालीका प्रमुख २६३, नगरपालीका उपप्रमुख २६३, वडाध्यक्ष ६६८०, वडा सदस्य २६,७२० निर्वाचित हुनेछन् । यसपटक कानुन ले नै महिला र दलित समुदायलाई विशेष स्थान दिएको छ । यसपटक को स्थानीय तहको निर्वाचन फरक ढंगबाट हुन लागेको र २० वर्षपछि हुन लागेको हुनाले धेरैले यस निर्वाचनलाई चासोका साथ हेरेका छन् । राजनीतिक दलका गतिविधिहरु बढ्दै गएका छन् भने जनताहरु पनि उत्साहित भएका छन् ।
यही परिवेशलाई मध्यनजर गर्दै तन्नेरी चासो, पाल्पाले वैशाख ११ गते लोकतन्त्र दिवसको अवसर पारेर एउटा अभियान संचालन गरेको थियो । तन्नेरी चासोका स्वयंसेवकहरु ः प्रदिप घिमिरे, विप्लव पाण्डे, बिमला कुँवर, दीपा पाण्डे, सविना न्यौपाने, सबिना बज्राचार्य, मञ्जु भट्टराई, सागर बराली, सुनिल कार्की लगायत को सक्रियतामा तानसेन पाल्पाको मुख्य बजार क्षेत्रमा बसोबास गर्ने विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरुको निर्वाचनको सम्बन्धमा अभिमत बुझ्ने प्रयास गरेका थियौं । तानसेन बजारको शितलपाटी, भगवतीटोल, टक्सारटोल, सिलखानटोल, मखनटोल, असनटोल, नारायणटोल, भिमसेनटोल, टुँडिखेल, बसपार्क, बडिज्ञानटोल लगायतका स्थानमा भेटिनुभएका विद्यार्थी, शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारी, पत्रकार, व्यापारी, व्यवसायी, उद्योगी, सुरक्षाकर्मी, गृहिणी, मजदुर, सर्वसाधारण गरी करबि ५० जनाको प्रतिक्रिया लिएका थियौं । यस क्रममा युवा, प्रौढ, बृद्ध, शिक्षित, अशिक्षित, जनजाती, दलित, महिला, पहाडिया, मधेसी, धनि, गरबि, हिन्दु, बौद्ध, मुस्लिम सबैलाई समेट्ने प्रयास गरिएको थियो ।